Investments cabbircawl si loo bilaabo shan lacag cryptocurrency cusub 2018
cabbircawl Investments, taas oo ka dhigtay in ay ka hawl maal caadiga ah si ay u soo duuduubo on Seeraar, ayaa qorshaynaysa in ay bixiyaan afar hal lacagta lacag cusub crypto oo kale oo ku salaysan dambiil ah lacagaha digital by bilowgii April.
"By dhamaadka bilood ee hore ee sanadkan, waxa aan heli doonaa guud ahaan sideed waxyaabaha maalgashi,"Agaasimaha Maamulka cabbircawl Michael Sonnenshein ku sheegay wareysi uu Tuesday ee Vancouver.
Cabbircawl ee asalka Seeraar Investment Trust, oo xagga farsamada ka badan-the-counter Maraykanka, ayaa hirkii ka badan 1,300 boqolkiiba sannadkii la soo dhaafay sida maal hay'adaha ka iibsan Shilimaad digital mamnuucay si toos ah hase ahaatee doondoonaan gaadhista guulaha ee cryptocurrencies.
Sonnenshein ayaa sheegay in lacagta lagu habaysan sida Investment Seeraar Trust, la siiyo maal awood u leh inay helaan gaadhista lacagaha digital iyada oo iibka ah ee ammaanka ah.
Sonnenshein yiri "gaariga Si qaban doonaa lacagaha digital dareere top, waxa ay noqon doontaa cap-miisaamaa suuqa, iyo isku dheeli tiran oo ku salaysan afartii biloodba. "
Shirkadda ku salaysan York New waa "lagu hayo dhegahayaga u furan yahay waxa maal rabto gaadhista,"Ayuu yiri Sonnenshein. "Haddii ay jiraan lacagaha qaarkood in maal-codsanaynaa oo naga mid ah si uu u qaabeeyo waxyaabaha ku xeeran, ka dibna waxaan rabnaa in aan waxaa jiri in ay ka dhergin baahida in. "
Hay'adda rating Weiss saartay fasalada on cryptocurrencies – Seeraar helo C +
Qiimeynta Weiss, qaranka ee hay'adda hogaaminaya rating ka madaxbannaan hay'adaha maaliyadeed, maanta soo bandhigtay qaranka ee fasalada ugu horeysay abid ku cryptocurrencies hay'ad maaliyadeed rating.
Maxaa ka dhigay Weiss 'galo ratings cryptocurrency muhiim ah waa in ay taariikhda ee xornimada iyo saxsanaanta ee qaybaha kale ee maalgashiga, sida uu u sheegay laga xoreeyo dalka ah. Xafiiska Xisaabtanka Dowladda (Gao), Barron ee, The Wall Street Journal, iyo The New York Times, kuwo kale.
The Qiimeynta Weiss Cryptocurrency qiimeeyo halista qiimaha, Ajir iman kara, technology blockchain, korsashada, ammaanka, iyo arrimo kale. "Maaddaama ay isbedel deg deg ah in xogta,"Sharxayaa Weiss, "Casriyaynta iyo kolba yihiin inta badan soo noqnoqda badan ee qaybaha kale ee aan dabooli."
Seeraar (qiimeeyo C +) helo dhibcaha wanaagsan ammaanka iyo ansaxinta baahsan. Laakiin waxaa la aqrinayo ciriiriga waaweyn network, sababaya daahid iyo kharashka xawaalad sare. Inkastoo dadaal socda oo aad u daran in lagu gaaro qaar ka mid ah guul hore, Seeraar ma laha awood degdeg ah si dhakhso ah casriyeeyo code software ay.
Qiimeynta Weiss, kaas oo bilaabay in 1971, heerarka 55,000 hay'adaha iyo maalgelinta. Si ka duwan Standard & ee Poor, Moody ee, Fitch iyo A.M. Best, Weiss marnaba aqbala magdhow nooc kasta oo ka hay'adaha ay u qiimeeyay.
Karbaashana, waxaa soo afjaridda taageero Seeraar
Payment karbaash processor mar dambe ma ay taageertaa Seeraar sida habka lacag laga bilaabo April 2018.
Karbaash bilaabay aqbalayaan Seeraar in 2014 laakiin hadda culayskan fii Seeraar iyo jeer xaqiijin xad gaabis ah sida sabab u ah ee joojinta cilaaqaadka ay la leedahay Seeraar.
Dowladda South Korean baaraan-weydaarsiga cryptocurrency’ ammaanka
weydaarsiga Seeraar South Korean ayaa la baaray iyo heerarka ammaanka ma jiro kulmaya, sida ay dowladda South Korean. Mid kasta oo ka mid ah 8 weydaarsiga kormeero waxaa loo arkayay “ku filnayn” iyo talooyin la sameeyey si ay u horumariyaan ammaanka.
sharciyo cusub u kordhin doonaa ganaax iyo tilmaamaha waqti is dhaafsi si loo cusboonaysiiyo si ay u buuxiyaan shuruudaha ama fool suurto gal ah in la xiro.
Tani waxa ay muujinaysaa dowladda South Korean ayaa la qaadanaya is dhaafsi cryptocurrency dhab ah iyo waxa la qiimeeyo ammaanka.
Digital Lacagta Hantidhawrka Friedman LLP ka saaraysaa oo dhan sheegaye of Bitfinex website ka
Friedman LLP, adeegga hanti lacagta digital ah, saaro wixii Xusuuso hore ee Bitfinex sida macmiilka, iyo saaro Xusuuso kasta oo iyaga ka mid ah ka ay news feed.
Tan waxay ka timaaddaa sida shaki koraan of xiriirka ka dhexeeya Bitfinex iyo dulqaadkiina sida USDT ah (calaamadihii dulqaadkiina) ayaa lagu qabtay by million isbuucaan ee la soo dhaafay.
City ee Vermont in ay isticmaalaan blockchain waayo diiwaanka diiwaanka dalka
Magaalada South Burlington, Vermont, waxaa trialing nidaamka diiwaangelinta dal isticmaalaa blockchain oo qayb ka ah nidaamka lagu qoro lahaanshaha.
Xafiiska Karaaniga ee City ayaa Isniintii in la shuraako la xawaaladaha blockchain Propy in uu kaydiyo xogta maamulka rikoorka dalka, sida lagu sheegay war-saxaafadeed uu soo. Ujeedada pilot ee waa in la horumariyo ledgerka a ool ah iyo ammaan dhinca dhaqdhaqaaqa hantida maguurtada gool oo dheeraad ah la qiimeeyo sida fiican ee isticmaalaya madal blockchain ku salaysan hoos u dhigi doontaa kharashka kaydiyo macluumaadka maamulka dalka marka loo eego hababka dhaqanka.
Karaaniga South Burlington ee City, Donna Kinville, ayaa sheegay in magaalada “had iyo jeer ku mashquulsan yahay ka faa'iidaysanaya technology in ay wanaajisaa ay bixinta adeegyada si dadka deegaanka. Waxaan diyaar u nahay ka this pilot Propy bartaan.”
bangiga Nordea mamnuucay shaqaalaha ka ganacsiga Seeraar
Nordea, bangi Northern Yurub ku salaysan baxay Finland, ayaa u sheegay oo dhan 31,500 shaqaalaha aan ay ku ganacsan kartaa Seeraar.
Nordea ka Feb soo rogi doonaa ganaax. 28, ka dib markii ay guddiga ku heshiiyeen in ay qaataan mawqif ah ay sabab u tahay "nooca aan sharciyeysneyn" ee suuqa, Afhayeen u Afroditi Kellberg yiri by phone on Monday.
"Waa dhaqanka baahsan ee guud ahaan warshadaha bangiyada inay xaddido koontada shakhsiga ah wax looga qabto ka mid ah shaqaalaha si looga hortago iyaga oo xilal in maal-kuteen, ama kaas oo u bandhigan laga yaabo inay halis ka mid ah dhaqaale oo sidaas daraaddeed saameyn ay taagan dhaqaale,"Ayuu yiri Kellberg. Sidaa darteed "Nordea, sida bangiyada oo dhan, wuxuu xaq u leeyahay in ay dejiyaan siyaasadaha ku saabsan arrintan khuseeya shaqaalaha. "
Nordea ayaa sheegay in ay siyaasad "waxaa ka mid ah qodobada KMG ah shaqaalaha la haystaa ay hadda jira iyo u oggolaanaysa in qaarkood laga reebo." Shaqaalaha oo hore leedahay Seeraar yihiin "ogol yahay in ay sii haystaa ay hadda jira."
Nordea waa bangiga ugu horeeyay ee koob weyn oo Yurub ay ku soo rogaan ganaax sida a.
Post Previous:Yuu yahay John Hyman, ama waxa aan ogaado oo ku saabsan la taliyaha maalgashiga telegraam
Post Next:Robotrading ama Trading Buugga